यौन चाहाना पुरुषलाई बिहान र महिलालाई राति किन ? यस्तो छ कारण - हरियाली नेपाल
माओवादी केन्द्र ‘प्रचण्ड’ # राप्रपा महाधिवेशन सर्वोच्च कोरोना # काँग्रेस महाधिवेशन #राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड
यौन चाहाना पुरुषलाई बिहान र महिलालाई राति किन ? यस्तो छ कारण
न्यूज डेस्कः २०७८ पुष २८, बुधबार
काठमाण्डौः मानिसहरु यौनको बारेमा मनमा उकुसमुकस पालेर बस्छन तर धेरै कुराकानी गर्न रुचाउँदैनन् । तर सुखद जीवनको लागि यौन जीवन पनि सुखद हुनु जरुरी छ । यसको लागि यौनको बारेमा एकअर्कामा खुलेर कुरा गर्ने वातावरण हुनुपर्दछ । जसरी जीवनमा खाना, निन्द्रा र अन्य दैनिक काम जरुरी छ, सेक्स पनि त्यतिकै जरुरी छ । हाम्रो समाजमा यौनकै कारण कतिपय परिवार भाँडिएको छ, झगडाको बिउ रोपिएको छ । यो यसकारण पनि भइरहेको छ कि हामीलाई यौनको जैविक जानकारी कम छ ।
हामी मध्ये धेरैलाई सेक्स कतिबेला गर्नुपर्छ भन्ने नै थाहा छैन । हालसालै अमेरिकन मेडिकल एसोसिएसनमा भएको एक अनुसन्धानमा पुरुष बिहानको समयमा यौन गर्न बढी इच्छुक हुने रहस्य खुलेको छ । तर, ठिक उल्टो महिला भने मध्यरातमा बढी रोमान्टिक हुने र यौन सम्पर्क गर्न रुचाउने तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।उक्त अनुसन्धानका अनुसार यस्तो हुनुको पछाडि हर्मोनले भूमिका खेल्ने गर्दछ ।
हर्मोनकै कारण महिला राति बढी रोमान्टिक हुन्छन भने पुरुषलाई यतिबेला कम रुचि राख्ने वा सुत्ने गर्दछन् ।यस्तै समस्या महिलालाई बिहान हुन्छ । बिहानको समयमा पुरुष धेरै रोमान्टिक हुन्छन् भने महिला ठिक उल्टो । अनुसन्धानमा पत्ता लागे अनुसार बिहान ५ देखि ७ बजेसम्म पुरुषको टेस्टेस्टेरोन हर्मोनको मात्रा बढी हुन्छ जसको कारण पुरुषको मन त्यतिबेला बढी रोमान्टिक हुन्छ र उनीहरु सेक्सको लागि लालायीत हुन्छन् ।
अनुसन्धानमा पुरुष जति गहिरो निन्द्रा सुत्छन, त्यति टेस्टेस्टेरोनको मात्रा बढी हुने तथ्य खुलेको छ । अमेरिकन मेडिकल एसोसिएसनले गरेको उक्त अध्ययनका अनुसार ५ घन्टाभन्दा बढी सुत्नाले पुरुषमा टेस्टेस्टेरोनको मात्रा १५ प्रतिशतसम्म बढ्न सक्छ ।
अनुसन्धानका अनुसार सुतेर उठ्दा पुरुषमा यौनको चाहना धेरै हुन्छ जबकि यसको उल्टो महिलामा एकदमै कम । साँझ ६ बजेपछि पुरुषमा टेस्टेस्टेरोनको मात्रा घट्न थाल्छ । जबकि महिलामा सेक्स हर्मोनहरु बढ्न थाल्छ ।
साँझ ढल्कन थालेपछि महिलाहरुमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी सेक्सको चाहना बढ्छ । सबैभन्दा धेरै ध्यान दिनुपर्ने कुरा त अनुसन्धानबाट अफिसको तनाव बढी हुने पुरुषमा टेस्टेस्टेरोनको मात्रा घट्छ ।-एजेन्सी